Nepal Samaya | बीपीको डेढवर्षे कार्यकाल : इजरायललाई मान्यतादेखि सगरमाथा विवाद अन्त्यसम्म
बीपीको डेढवर्षे कार्यकाल : इजरायललाई मान्यतादेखि सगरमाथा विवाद अन्त्यसम्म
होमनाथ दाहाल | काठमाडौं, बिहीबार, भदौ २४, २०७८
बीपीसँग लामो समय संगत गर्ने अवसर पाएँ। उहाँसंँग देशमा विभिन्न भागको भ्रमणमा जान पाएँ। राष्ट्र पुकार साप्ताहिकको सम्पादकका रुपमा काम गर्दा बीपीले इतिहासका कैयौं महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमबारे सुनाउनुभयो। बीपीले मलाई विभिन्न प्रसंगमा नेपालको विदेश नीतिसँग सम्बन्धित घटनाक्रम सुनाउनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले भारतसँग समानताको आधारमा व्यापार सन्धि गराउनुभयो। त्यो बेलाको भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य सचिव स्कुल पढ्दाका उहाँका साथी रहेछन्। त्यस कारण पनि विभिन्न चरणको छलफलपछि भारतीय उद्योगले स्थापना भएपछि जसरी नेपाली बजारमा सहज प्रवेश पाउँछन्, त्यसै गरी नेपालमा स्थापना भएका उद्योगले पनि भारतीय बजारमा सुविधा पाउने गरी सन्धिको मस्यौदा तयार भयो तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ भइरहेको थियो।
त्यही बेला बीपी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट भाग लिएर अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किंदै हुनुहुन्थ्यो। सीधै नेपालसम्मको उडान सुविधा नभएकाले दिल्ली भएर आउनुभयो। सन्धि हस्ताक्षरमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ भारत सरकारलाई खबर नै नगरी जहाजको समयभन्दा डेढ घण्टा पहिले नै विमानस्थल पुग्नुभयो। त्यो कुरा भारतीयहरुलाई थाहा नहुने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री जवाहलाल नेहरुसम्म सूचना पुग्यो, नेहरु आफैं बीपीलाई भेट्न विमानस्थलमा पुगे।
सन् १९६० मा नयाँदिल्लीमा जवाहरलाल नेहरूसँग बीपी कोइराला। तस्बिर : गुगल
बीपीले भन्नुभएछ, ‘मैले नेपालको विकासका लागि त्यति प्रस्ताव गरेको त्यो पनि तपाईंले गरिदिनु भएन।’ नेहरुले सचिवलाई विमानस्थलमै बोलाएर भने, ‘त्यो सम्झौतामा के छ? नेपालले के मागेको छ।’ सचिवले भनेछन्, ‘हजुर त्यो सम्झौता गर्ने हो भने आर्थिक रुपमा भारतलाई ठूलो नोक्सान हुन सक्छ र नेपालका तर्फबाट त्यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ।’
नेहरुले सोधे, ‘कति नोक्सान हुन्छ?’
सचिव, ‘त्यही दस अर्ब जति।’
अनि नेहरुले भने, ‘ठीक छ। त्यति नेपाललाई सहयोग भयो भन्ठान। सही गरिदेऊ।’
उहाँ फर्किएपछि मन्त्री रामनारायण मिश्र दिल्ली जानुभयो र पहिलोपटक नेपाल–भारतबीच समानताका आधारमा व्यापार वाणिज्य सन्धि भयो। तर सहमति कार्यान्वयन नहुँदै राजाले संसदीय व्यवस्थामा कू गरे। त्यो सन्धिको व्यापक दुरुपयोग भयो। नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा नक्कली कम्पनी खडा गरी ‘मेड इन नेपाल’ छाप लगाएर भारतमा सामान पठाउने काम भयो। यसरी सन्धि लामो समय जान सक्ने वातावरण भएन। त्यसयता कति पटक भारतले नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगायो तर समानताको आधारमा सन्धि हुन सकेको छैन।
बीपी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुग्नुभएको थियो। त्यो बेला सिंगो विश्व प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट दुई ध्रुवमा विभाजित थियो भने अविकसित साना मुलुकका समस्या विकराल थिए।
त्यो सम्मेलनमा रुसका प्रधानमन्त्री निकिता ख्रुस्चेबले राष्ट्रसंघमा तीन वटा महासचिव राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। पश्चिम, कम्युनिस्ट र तेस्रो मुलुकका लागि छुट्टा–छुट्टै महासचिव हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। रुसको यस्तो प्रस्तावले राष्ट्रसंघको हालत ‘लिग अफ नेसन्स’को जस्तै हुनसक्ने भन्दै धेरै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए। आफ्नो भनाइमा ध्यान नदिएको भनेर ख्रुस्चेवले टेबलमा जुत्ता ठटाइदिए।
महाशक्ति राष्ट्रका नेताको त्यस्तो व्यवहारपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापाले बीपीको अनुमति लिएर उनको त्यो व्यवहारको विरोध गरे। त्यसपछि ख्रुस्चेबले के बताए भने विश्व नक्सामा नेपाल कहाँ रहेछ म आफ्ना निजी सचिव लगाएर खोज्न लगाउँछु। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाइएपछि बीपी आफैंले प्रतिवाद गर्नुभयो।
बीपीले भन्नुभएको थियो– नेपाल एक संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट विजयी चार सदस्य छन्। तीमध्ये एक जना त यति बेला नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै रुसमा छन्।
त्यहाँ बीपीले भन्नुभएको थियो– नेपाल एक संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट विजयी चार सदस्य छन्। तीमध्ये एक जना त यति बेला नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै रुसमा छन्।
महाशक्ति राष्ट्रहरुबीच ध्रुवीकरण चलिरहेका बेला राष्ट्रसंघ साना राष्ट्रहरुको हितका पक्षमा उभिनुपर्ने विचार बीपीले राख्नुभयो।
विली ब्रान्टदेखि बीपीका सोसलिस्ट साथीहरुले उहाँको प्रस्तावको समर्थन गरे। बीपीको प्रशंसा भयो।
अनि ख्रुस्चेब र बीपीबीच वार्ता पनि भयो। त्यो बेला ख्रुस्चेबले भनेका थिए, ‘अघिको कुरा बिर्सिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। भन्नुस् तपाईंहरुलाई हामीबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ?’ अनि बीपीले भन्नुभयो, ‘नेपालको विकासका लागि मैले पञ्चवर्षीय योजना अघि सार्दैछु, मुख्यतया सडक निर्माण र ठूला उद्योग स्थापनामा हामीलाई तपाईंहरुको सहयोग चाहिन्छ।’
रुसले सहयोगको प्रतिबद्धतता जनायो तर बीपी फर्किएको केही समयपछि राजाले कू गरिहाले। पछि त्यही सहमतिका आधारमा रुसीहरुले पथलैयादेखि ढल्केबरसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाइदिए। साथै, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखानालगायत चारपाँच वटा ठूलो उद्योग स्थापनामा सहयोग गरे।
राष्ट्रसंघबाट फर्किंदा बीपीले इजरायलको भ्रमण गर्नुभयो। उहाँको साथमा भारतीय समाजवादी पार्टीका एक नेता पनि थिए। बीपीले त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो बेला बीपीलाई बधाई दिँदै ती भारतीय समाजवादी नेताले भनेका थिए, ‘बीपीबाबु तपाईंले साँच्चै गज्जबको परिकल्पना गर्नुभएको रहेछ। वास्तवमा हामी प्रधानमन्त्री नेहरुबाट यस्तो अपेक्षा गर्थ्याैं।’
‘उनीहरुको सहयोग लिएर म नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना सञ्चालन गर्न चाहन्थें। जस्तो पूर्वमा मोरङमा मध्यमा चितवनमा, पहाडमा पोखरामा र सुदूरपश्चिममा धनगढी, यो जस्ता ठाउँमा त्यस्ता केन्द्र खोलेर भूतपूर्व सैनिकहरुको सहभागितामा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने मेरो सोचाइ थियो।’
त्यही बेला बीपीले इजरायललाई राजनीतिक मान्यता दिनुभयो। दक्षिण एसियाबाट इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल पहिलो राष्ट्र हो। बीपीले मसँग भन्नुभएको थियो, ‘उनीहरुको सहयोग लिएर म नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना सञ्चालन गर्न चाहन्थें। जस्तो पूर्वमा मोरङमा मध्यमा चितवनमा, पहाडमा पोखरामा र सुदूरपश्चिममा धनगढी, यो जस्ता ठाउँमा त्यस्ता केन्द्र खोलेर भूतपूर्व सैनिकहरुको सहभागितामा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने मेरो सोचाइ थियो।’
एक पटक मैले सोधेको थिएँ, ‘सैनिकहरु नै किन?’
उहाँले भन्नुभयो, ‘सैनिक भनेको १५/२० वर्ष एउटा अनुशासनमा बसेको हुन्छ, उनीहरुलाई अनुशासन थाहा हुन्छ, कति बेला खाने, कति बेला सुत्ने, कति बेला के गर्ने? अर्को कुरा उनीहरुलाई कुरा सम्झाउन पनि सजिलो हुन्छ। सैनिकले काम सिकेपछि उनीहरुमार्फत किसानलाई तालिम दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो तर राजाले कू गरिहाले। मैले त्यो योजना अघि बढाउन पाइन।’
त्यसैगरी भारतीय र ब्रिटिस सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन देश विकासमा लगाउने आफ्नो योजनाबारे बीपीले एक पटक मलाई सुनाउनुभएको थियो। उहाँले यस विषयमा भारत र बेलायतसँग कुरा गरिसक्नुभएको थियो। बीपीले भन्नुभएको थियो- ‘भूपू सैनिकहरुको १० वर्षको पेन्सन मलाई एकमुस्ट दिने व्यवस्था गरिदिनुस्। म त्यसलाई बैंकमा राखेर नेपालको विकासमा लगाउँछु र भूपू सैनिकलाई समयमै उनीहरुको पेन्सन दिने कुराको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्छ। उनीहरुको पेन्सनमा कुनै गडबड हुँदैन।’
त्यही आधारमा औद्योगिक विकास बंैक (एनआईडीसी) स्थापना गर्नुभयो, औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्छ भनेर। २०३६ सालको जनमतसंग्रहताकाको कुरा हो। बीपीका साथ म पनि नेपालगन्जको कार्यक्रममा गएको थिएँ।
नेपालगन्ज विमानस्थलबाट पहाडतिर उड्दा तल झुपडी मात्र देखिए। जंगल फँडानी भएको छ। मानिसको जीवन स्तर त्यस्तो देखेर बीपीको आँखाबाट आँसु झर्‍यो। अनि मैले सोध्नैपर्‍यो, के भयो सान्दाइ ? किन आँसु झार्नुभयो?
उहाँले माथिको प्रसंग सुनाउँदै भन्नुभयो। मैले देश बनाउन त्यस्तो परिकल्पना गरेको थिएँ। राजाले काम गर्न दिएनन्। आज जनताको यो हाल देख्दा लाग्छ मेरो सपना चकनाचुर भयो। अनि भन्नुभयो ‘हेर त तल जंगल फाँडेर झुपडी मात्रै पो बनाएका छन् त?’
बीपी चीन भ्रमणमा जाँदा दलाई लामा भागेर भारत पुगेका थिए। ल्हासामा चीनले सैनिक हस्तक्षेप गरिसकेको थियो। त्यही बेलामा चीनले सगरमाथाको प्रश्न उठायो। सगरमाथा, तिब्बतमा पर्छ अर्थात् चीनमा पर्छ भनेर।
उहाँलाई चीन जानुअघि नै यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने लागेको थियो। त्यसैले पूरा तयारीका साथ जानुभएको थियो। चीन हिँड्नुअघि उहाँले दुई पटक इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यसँग कुराकानी गर्नुभयो। आचार्यले सगरमाथा क्षेत्रको अध्ययन गर्नु गरी त्यहाँका जनतासँग तिमीहरु यसलाई के नामले पुकार्छौं? भन्दै सोधी–खोजी गरी २०१३ सालमा एउटा अखबारमा लेख लेख्नुभएको थियो। जसमा पहिलो पटक माउन्ट एभरेस्टलाई सगरमाथा भनिएको थियो।
त्योभन्दा पहिला त्यो चुचुरोको नाम भारतीय र बेलायतीहरुले माउन्ट एभरेस्ट राखेका थिए। तिब्बतियनहरु चोमुलुङ्गा भन्थे। बाबुरामसँग कुराकानी गरी सगरमाथाको नक्सासहित बीपी चीन भ्रमणमा निस्कनु भएकाले त्यहाँ प्रस्तुत हुन सहज भयो।
चीनले सगरमाथा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै दाबी प्रस्तुत गर्‍यो। बीपीले सम्झाउन धेरै प्रयास गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग कुरा मिलेन। अनि बाबुराम आचार्यले दिएको नक्सा देखाएर सगरमाथाभन्दा ४–५ किलोमिटर उत्तरसम्मको भूमि नेपालभित्र पर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो।
तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सन् १९६० मा नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै। तस्बिर : गुगल
एक दिनको कुरा हो। अचानक मध्यरातमा कसैले बीपी बसेको होटलको ढोका ढकढकाएको आवाज सुनियो। बीपी सुत्ने तरखरमा हुनुहुन्थ्यो।
खोलेर हेर्दा एक जना चिनियाँले भनेछन्– अध्यक्ष माओ तपाईंलाई अहिले भेट्न चाहनुहुन्छ। यही होटलको अर्को भागमा प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ।
राति नै माओसँग उहाँको भेट भयो। माओले सगरमाथालाई दुवै देशको मितेरी चुचुरोका रुपमा राख्न प्रस्ताव गरे। बीपीले भन्नुभयो, ‘सगरमाथासँग नेपालीको भावनात्मक सम्बन्ध छ। हामी आफ्नो भू–भागलाई साझा चुचुरो बनाउन सक्दैनौं।’
त्यो भ्रमणमा बीपीसँग यातायात मन्त्री गणेशमान सिंह र गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने काममा यी दुईजना मन्त्री किन लगिए? यो बडो संवेदनशील कुरा छ।
अध्यक्ष माओले अन्तिममा भनेका थिए, ‘ठिक छ अरु विषयमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसित कुरा गर्नुहोला।’
बीपी फर्किनुभयो। त्यसको केही समयपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो। अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरुले नेपालको भूमिमा चीनले दाबी गरेको हो भनेर प्रश्न उठाए।
पीटीआईका संवाददाताले सोधे, ‘होइन, सगरमाथामा चीनले दाबी गरेको कुरा के हो? के चीन नेपालको भूमिमा दाबी गर्न चाहन्छ?’
प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भनिदिए, ‘पहिलो कुरा त हाम्राबीच कुनै विवाद छैन। भए पनि हामी आपसमा मिलेर समाधान गर्छौं।’
फेरि पनि ती पत्रकारले दोहो¥याएर प्रश्न सोधेपछि अलिकति दिक्क भएर चाउ एन लाईले भनिदिए, ‘यो विषयमा इन्डियनलाई किन चित्त दुखाइ? नेपालको प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ। त्यसलाई चीन स्वीकार गर्छ। हामी कसैको भूमि लिन चाहँदैनौं। ९२ लाख किलोमिटर त चाइनाको आफ्नै भू–भाग छ, त्यसमा हामीलाई अरुको किन चाहियो?ण् यो हाम्रो र नेपालको मामिला हो।’ यसरी सगरमाथा विवादको अन्त्य भयो।
तर एउटा बिडम्बना २०१७ साल पुस १ को घटनापछि २०१८ मा राजा महेन्द्र चीनको भ्रमणमा गए। फर्किएपछि अहिले रत्नपार्क रहेको स्थानमा राजाको ठूलो नागरिक अभिनन्दन भयो।
त्यसबेला एउटा सानो विद्यार्थीको हैसियतले म त्यहाँ पुगेको थिएँ। राजाले त्यो दिन भनेको अझै याद छ, ‘नेपाली जनतालाई यो भन्न पाउँदा मलाई बडो खुसी लागेको छ। सगरमाथा हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यहीं छ र भोलि पनि त्यहीं रहनेछ।’ जनताले राजाको कुरा के बुझे कुन्नि तर ताली भने पिटे।
बीपीले दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन चीनसँग समानताको आधारमा नेपालको प्रतिष्ठा, इज्जतलाई सम्मान हुने गरी सम्झौता गराउनुभयो। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व शक्ति राष्ट्रहरुलाई समेत प्रभावमा पार्न सक्नु बीपीको कूटनीतिक सफलता हो। त्यसैगरी इजरायललाई मान्यता दिनु पनि कम क्रान्तिकारी निर्णय थिएन।
नेपालका लागि बीपीको त्यो डेढ वर्षे कार्यकालमा जति उपलब्धि हासिल भएको थियो, त्यसपछिका कुनै सरकारले त्यो तहमा काम गर्न सकेनन्। पञ्चायतको कुरै छोडौं, लामो समय कांग्रेसले नै सरकार चलायो। आफूलाई बडो क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि पटक–पटक सरकारमा गए, कसैले पनि यो स्तरमा नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा बचाउने गरी सम्झौता गर्न सकेनन्। (दाहालसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
प्रकाशित: September 9, 2021 | 13:35:09 काठमाडौं, बिहीबार, भदौ २४, २०७८
पत्रकार होमनाथ दाहाल नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री हुन्।